၀နယ်က လူငယ်ကေဒါတွေအတွက် ပထမဆုံးပေးတဲ့ သင်တန်းက ဘယ်လို ထူးခြားပါလဲ - ข่าวสด
၀နယ်က လူငယ်ကေဒါတွေအတွက် ပထမဆုံးပေးတဲ့ သင်တန်းက ဘယ်...
16 ก.ย. 2564 - 23:45 น.
ဝ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ (UWSP)က လူငယ်ကေဒါတွေအတွက် လေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကြာသပတေးနေ့က ဖွင့်လှစ် လိုက်ပါတယ်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ပုန်ကန်ပြီး အဲဒီအချိန်က စစ်အစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲကာ သူတို့ဘာသာ သူတို့ ရပ်တည်လိုက်တဲ့ ဝ ပြည်သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးပါတီ (UWSP)ဟာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်တွေထဲမှာ အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ဝ တပ်ဖွဲ့ (UWSA)ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။
ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာမှ ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း တစ်ခု ကို စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်၊ အခုလည်း လူငယ်ကေဒါတွေအတွက် ပထမဆုံး အကြိမ် သင်တန်းဖွင့်တာမို့ အများက စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်နေပါတယ်။
အခု နိုင်ငံရေးကေဒါကျောင်းဖွင့်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတဲ့အပေါ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာသုံးသပ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဦးမောင်မောင်စိုးက “ပုံမှန်အားဖြင့်က စစ်သင်တန်းတို့၊ နိုင်ငံရေးသင်တန်းတို့က ဝနယ်မှာ ရှိနေတာပါ၊ မနှစ်ကတော့ ဗိုလ်သင်တန်းဖွင့်တယ်၊ အခုကတော့ နိုင်ငံရေး ကေဒါ သင်တန်းပေါ့၊ ဗိုလ်သင်တန်းကတော့ တပ်နဲ့ ဆိုင်တယ်၊ ဒါကတော့ နိုင်ငံရေး ကေဒါ မွေးမြူရေးအတွက် စနစ်ပိုကျအောင် လုပ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လို့ ထင်ပါတယ်၊ အဓိကကတော့ ဝနယ် က သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းအရဆိုရင် တည်ဆောက်ရေး ကာလပါ၊ နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး ပုံစံတွေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို လူငယ် ခေါင်းဆောင်တွေကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်ပုံရပါတယ်”လို့ ဆိုပါတယ်။
၁၉၆၀ နှစ်တွေ နှောင်းပိုင်းကစလို့ ဝဒေသဟာ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ထိန်းချုပ်မှု အောက်မှာ အနှစ် ၂၀ ကျော်၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ကစလို့ ဝပြည်သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး ပါတီအောက်မှာ အနှစ် ၃၀ ကျော် ရှိလာနေခဲ့ပြီး ခေတ်အဆက်ဆက် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရရဲ့ အာဏာစက်ကနေ လုံးဝနီးပါး လွတ်ကင်းနေတာ အနှစ် ၅၀ ကျော်လာ ခဲ့ပါပြီ။
လူငယ်ကေဒါတွေမွေးထုတ်ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ ဒီသင်တန်းဖွင့်ပွဲကို ဝခေါင်းဆောင် တွေဖြစ်တဲ့ ဝနယ် ပြည်သူ့အစိုးရ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးပေါက်ယူချန်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ တွေဖြစ်တဲ့ ဦးရှောက်မင်လျံ နဲ့ ဦးကျောက်ကော်အန်း၊ စစ်ဦးစီးချုပ် ဦးကျောက်ကျုံးတန်းတို့ စုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးက အသက် ၇၀ ကျော်တွင်းတွေမို့လို့ မျိုးဆက်သစ် အတွက် ပြင်ဆင်ပုံရတယ်လို့ ဆိုတဲ့အပြင် ဒီလို ခြေလှမ်းတွေက အခြေအနေ သစ်တွေအတွက် ပြင်ဆင်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီက ကေဒါဟောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဦးအေးမောင်ကျော် ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
“ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ဝနယ်ကိုယ်စား ခေါင်းဆောင်တွေက တင်တဲ့ အမြင်သဘောထားတွေ ရှိတယ်၊ အဲဒါတွေကို လူငယ်တွေကို သင်ကြားပေးပြီး နိုင်ငံရေးအရ၊ စစ်ရေးအရ ကြံ့ခိုင်အောင် လုပ်တဲ့ သဘောပဲထင်တယ်၊ နောင် အနာဂတ်မှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ပုံစံအားလုံးအတွက် ပြင်ဆင်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။”
စော်ဘွားတစ်ပိုင်း၊ စစ်ပဒေသရာဇ်တစ်ပိုင်း အုပ်ချုပ်မှုပုံစံနဲ့ သွားနေတာလို့ တချို့သုံးသပ်သူတွေ ပြောကြတဲ့ ဝနယ်က နိုင်ငံရေး ကေဒါသင်တန်းကနေ လူငယ် ခေါင်းဆောင်တွေ ပေါ်ထွက်လာမှာပါ။
ခေတ်အဆက်ဆက် မြန်မာအစိုးရစစ်တပ် နဲ့ အနှစ် ၃၀ ကျော် အပစ်အခတ်မရှိခဲ့တဲ့ ဝ တပ်ဖွဲ့ဟာ လက်ရှိစစ်တပ်ရဲ့ အာဏာသိမ်းမှုအပေါ် ထောက်ခံကြောင်းမပြသလို ကန့်ကွက်မှုလည်းမရှိဘဲ ခပ်ဆိတ်ဆိတ်သာ နေနေပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ဝ ဒေသ ကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ ဝ ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ သူတို့ဒေသကို ပြည်နယ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး ဝ တပ်ဖွဲ့၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဝ ကိုယ်ပိုင် တရားစီရင်ရေး စနစ်တွေနဲ့ ပြည်သူ့ရေးရာတွေကို စီမံခန့်ခွဲနေပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ၀နယ်က လူငယ်ကေဒါတွေအတွက် ပထမဆုံးပေးတဲ့ သင်တန်းက ဘယ်လို ထူးခြားပါလဲ